မင်းရဲ့ဝါသနာကို လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့ စဉ်းစားဖူးလား။ | Bezzia
မာရီယာ vazquez | 12/01/2022 10:00 | အချိန်အား
ဖန်တီးဖို့ စိတ်ကူးဖူးပါသလား။ ဝါသနာအရ စီးပွားရေးလုပ်ပါ။ ဖန်တီးမှု သို့မဟုတ် အနုပညာလား။ တော်တော်များများက အဲဒါကို တွေးဖူးကြမှာ သေချာပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ မင်း ခုန်ချရမှာကို ကြောက်လာလိမ့်မယ်၊ ငါတို့မှားသလား။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သင်အနှစ်သက်ဆုံးအရာဖြင့် ဝင်ငွေအချို့ရရှိရန် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူရန်ဖြစ်သည်။
ပန်းချီဆွဲခြင်း၊ အပ်ချုပ်ခြင်း၊ သားရေလုပ်ခြင်း၊ မြေအိုးပုံသွင်းခြင်း၊ ယက်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းတို့ကို ကျွမ်းကျင်ပါသလား။ တမူထူးခြားပြီး စစ်မှန်သော အရာဝတ္ထုကို အယူခံဝင်ခြင်းသည် ယနေ့ခေတ်မှ တဆင့် တောင်းဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ လူမှုရေးကွန်ရက်များ သင့်ဝါသနာကို ငွေရှာရန် ကူညီနိုင်သည်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ မွေးဖွားလာတဲ့ အမြတ်အစွန်းရှိတဲ့ လုပ်ငန်းများစွာရှိပေမယ့် ပါရမီနဲ့ ကံကောင်းခြင်းကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ကွယ်မှာ အမြဲရှိနေတယ်။ အစီအစဉ်၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့် အလုပ်. သင့်ဝါသနာကို လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲစေမည့်သော့များကို သင်သိချင်ပါသလား။ ယနေ့ ၎င်းတို့ကို သင်နှင့်မျှဝေပါသည်။
2 အလုပ်တစ်ခုလို့ မှတ်ယူပါ။
4 မင်းရဲ့အလုပ်ကို လူသိများအောင်လုပ်ပါ။
5 မဟာမိတ်များနှင့် လမ်းကြောင်းသစ်များကို ဖန်တီးပါ။
အကြံဥာဏ်တစ်ခုအား အခွင့်အလမ်းအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် အစီအစဉ်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ Y အစီအစဉ်တစ်ခုရေးဆွဲရန် ကိုယ့်ဝါသနာကို လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့အတွက် မှန်ကန်တဲ့ စက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေ ရှိသလား၊ စီးပွားရေးအရရော အဆင်ပြေပါ့မလား။ ငါဘယ်သူ့ကိုရောင်းချင်တာလဲ
တီထွင်ဖန်တီးမှု ဝါသနာကို နှစ်သက်ခြင်းနှင့် ၎င်းမှ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခြင်းသည် အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော အရာများဖြစ်သည်။ သင်လုပ်သောအလုပ်ထက် ကျော်လွန်၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရန်၊ ပရိသတ်ကို စွဲကိုင်ထားရပေမည်။ သင့်ဝါသနာကို အလုပ်တစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် မင်းရဲ့ဝါသနာကို ရှုပ်ထွေးတဲ့စီးပွားရေးလောကနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ရတာက နှစ်ရက်အတွင်း အောင်မြင်မယ့်အရာမဟုတ်ဘူး။
ဒါကို သတိထားဖို့က အရေးကြီးတယ်။ မဟာဗျူဟာတစ်ခုစီစဉ်ပါ အစကတည်းက။ အခက်ခဲဆုံးသော ပထမအဆင့်များအတွင်း လမ်းညွှန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်မည့် မဟာဗျူဟာ။ သင်တိုးတက်သည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လိုအပ်မည်ကို အမြဲသတိရပါ။ စွန့်စားရမှာကြောက်ရင် တခြားသူတွေအတွက် အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ပြီး ကျန်တစ်ဝက်ကို မင်းရဲ့ဝါသနာအတွက် မြှုပ်နှံထားခြင်းဖြင့် အသက်မွေးနိုင်စေမယ့် နည်းဗျူဟာကို အရင်စဉ်းစားပါ။ ရှေ့ဆက်ဖို့ အချိန်ရှိမယ်။
ဝင်ငွေရှာချင်ရင်တော့ စတင်ရပါမယ်။ မင်းရဲ့ဝါသနာကို အလုပ်တစ်ခုလို့ မှတ်ယူပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သင်ပို့ဆောင်ပေးမည့် ပရောဂျက်များပေါ်တွင်သာမက စွန့်ဦးတီထွင်သူဖြစ်လာမည့် ဖြည့်စွက်အလုပ်များအပေါ် အခြေခံ၍ အပတ်စဉ် ဦးစားပေးစီစဉ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သော ဝါသနာတစ်ခုမှ လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်းသည် စိတ်အားထက်သန်သော်လည်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် သင့်ကိုယ်သင် အားကိုးနေရခြင်း၊ တာဝန်တွေ ဆက်တိုက်ထမ်းဆောင်တယ်။. သင့်ဖောက်သည်များနှင့် ဆက်ဆံရန် နှင့် လုပ်ငန်း၏ နည်းပညာပိုင်းကို စီမံခန့်ခွဲရန် လေ့ကျင့်ရန်၊ ဖန်တီးရန်၊ သင်အချိန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ အစီအစဉ်တစ်ခုမို့ သင်ဘာမှမမေ့ပါနဲ့။
သင်ယခု လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် စဉ်းစားနေသည့် ထိုဝါသနာကို ဇောက်ချလုပ်ကိုင်ရန် နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ကုန်ခဲ့ပေမည်။ ပြီး​တော့ သင့်​ကို တိုးတက်​​အောင်​လုပ်​​ဆောင်​​ပေးခဲ့တဲ့ နှစ်​​တွေကြာ​အောင်​ သင်​​တွေ ​အောင်​မြင်​လာလိမ့်​မယ်​ဆိုတာ ကျွန်​​တော်​တို့ သံသယဖြစ်​စရာမဟုတ်​​ပေမယ့်​ သင့်​မှာလည်း မရှိဘူးဆိုရင်​၊ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအသိပညာ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ရန် ခက်ခဲလိမ့်မည်။
လေ့ကျင့်ရေးက အရေးကြီးတယ်။. ၎င်းတို့ထဲမှ အကောင်းဆုံးကို မည်သို့ရယူရမည်ကို သိရှိနိုင်ရန် အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ စာရင်းကိုင်နှင့် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းကို တက်ရောက်ပါ။ သင့်ပရောဂျက်တွင် သင့်အား အကြံဉာဏ်နှင့် ပံ့ပိုးပေးနိုင်သော တူညီသောကဏ္ဍမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့များနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။ အခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ဆွေးနွေးပါ။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များကတည်းက သင်စတင်ခဲ့သည့် လမ်းကြောင်းအတိုင်း ၎င်းတို့စတင်ခဲ့ခြင်းသည် အများအားဖြင့် အလင်းပေးသည်။ အဆိုးနဲ့ ကောင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ အမှားတွေနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေအပေါ် အခြေခံပြီး သင်ယူထားပြီးသားပါ။
ယနေ့ခေတ်တွင် အွန်လိုင်းရှိနေခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ လူမှုကွန်ရက်များသည် သင့်ပစ်မှတ် သို့မဟုတ် ပစ်မှတ်ပရိသတ်ထံရောက်ရှိရန် အဓိကကိရိယာဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် သူတို့မှာ ပေါ်လွင်နေဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကို ဖန်တီးပါ။သုံးစွဲသူများက သင့်ကို ခွဲခြားသိမြင်စေသည့် ဂရပ်ဖစ်လိုင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သင့်အား ပြိုင်ဆိုင်မှုမှ ထင်ရှားစေသည်။
ကွန်ရက်များတွင် အထူးသဖြင့် Instagram တွင်၊ ဤအမှတ်တံဆိပ်ဒီဇိုင်းသည် အလွန်သက်ဆိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ထုတ်ကုန်ဓာတ်ပုံတွေကို တင်ရုံနဲ့ မတင်ပါနဲ့။; သင်အလုပ်လုပ်ပုံ၊ သင်အသုံးပြုသည့်ကိရိယာများ သို့မဟုတ် သင်မှုတ်သွင်းထားသည့်အရာများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခွင့်ပြုပါက ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖောက်သည်များသည် သင့်အလုပ်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာစာနာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ကိုယ်ရေးအကျဉ်းဆုံး။
သင်ဖန်တီးသော ထုတ်ကုန်များဖြင့် ငွေရှာခြင်းအပြင် အနာဂတ်တွင် သင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်ဟု တွေးပါ။ ကိရိယာများနှင့် သော့များ သို့မှသာ သုံးစွဲသူသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုများကို သင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင် အပေါက်တစ်ခုပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့် သင့်လုပ်ငန်းကို ကွဲပြားစေမည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
မဟာမိတ်များနှင့် လမ်းကြောင်းသစ်များကို ဖန်တီးပါ။
ဘာပဲလုပ်လုပ် မင်းရဲ့အနုပညာအမြင်ကို မျှဝေပေးမယ့်သူ အမြဲရှိနေမှာပါ။ ၎င်းတို့ကိုရှာဖွေပြီး ပေါင်းစပ်ဖန်တီးမှုများသည် သင့်လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ကွန်ရက်များရှိ အခြားပရိုဖိုင်များနှင့် အထူးပြုထုတ်ဝေမှုများဖြင့် နှစ်ဦးစလုံးသည် အမြဲတမ်း မဟာမိတ်ကောင်းများဖြစ်သည်။
၎င်းသည် သင့်ဝါသနာကို လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးရာတွင်လည်း ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ သင့်ထုတ်ကုန်အတွက် နည်းလမ်းအသစ်များ သို့မဟုတ် အသုံးဝင်မှုများ အဲဒါက မင်းကို ပြိုင်ပွဲနဲ့ မတူဘူး။ လုပ်ငန်းတစ်ခုစလုပ်တဲ့အခါ မတူညီမှုတွေကို အာရုံစိုက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
သင့်ဝါသနာကို လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် စဉ်းစားဖူးပါသလား။ ခုန်ပါ ကြီးမားသော ကနဦးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လိုအပ်သည့်အရာမဟုတ်ပါက စမ်းသုံးကြည့်ပါ။ အရမ်းကြီး တွေးကြည့်ရင်တော့ လွမ်းမိပြန်တယ်။ Bezzia တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ထပ်ကိရိယာများနှင့် အချက်အလက်များဖြင့် ဤအချက်အချို့ကို မကြာမီ တိုးချဲ့မည်ဟု ကတိပြုပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » အချိန်အား » မင်းရဲ့ဝါသနာကို လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့ စဉ်းစားဖူးလား။
Pregorexia၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာမှာကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း။